I-DAM3 Case Case Circuit Breaker Abavelisi kunye nabaxhasi - i-DAM3 Case Case Circuit Breaker Factory
Isishwankathelo se-DAM3-160 MCCB Case Case Circuit Breaker I-voltage ye-Dada DAM3-160 ebunjiweyo yesekethe yesekethe inokufikelela kwi-100V. Ezi zixhobo zombane zilungele ukuhanjiswa kwamandla kweesekethe ezinokutshintsha ngoku kwe-50-60Hz, umbane osebenzayo olinganisiweyo ukuya kuthi ga kwi-750V, kwaye ikalwe ukusebenza ngoku ukusuka kwi-10A ukuya kwi-100A. Ikhefu lesekethe lidlala indima ebalulekileyo ekusasazeni amandla kunye nasekukhuseleni isekethe kunye nezixhobo zamandla ekulayisheni kakhulu, kwiisekethi ezimfutshane, nakwi ...
I-DAM3-250 MCCB Icandelo leMeko eliBunjiweyo leSekethe
Amagqabantshintshi Okwangoku okulinganiselweyo kwe-Dada DAM3-250 yecala elibunjiweyo lesekethe elinokufikelela kwi-250A. Ezi zixhobo zombane zilungele ukuhanjiswa kwamandla kweesekethe ezinokutshintsha ngoku kwe-50-60Hz kunye nokusebenza okulinganisiweyo okwangoku ukuya kwi-1000A. Zingasetyenziselwa kwiimoto zombane ukuqala okungapheliyo kunye nokukhuseleka kokukhusela kunye nokukhuselwa ekujikelezeni okufutshane kunye neemeko zokungabikho kwamandla. Xa kuthelekiswa nothotho lwe-DAM1, uthotho lwe-DAM3 yenzelwe ivolumu encinci, ephezulu ...
I-DAM3-400 MCCB Ityala eliBunjiweyo leSekethe
Amagqabantshintshi Okwangoku okulinganiselweyo kwe-Dada DAM3-400 breaker breaker breaker inokufikelela kwi-400A. Ezi zixhobo zombane zikulungele ukukhuselwa kweesekethe zokuhambisa amandla ngokutshintshiselana ngoku kwe-50-60Hz kunye nokusebenza okulinganisiweyo okwangoku ukuya kwi-1000A. Zingasetyenziselwa kwiimoto zombane ukuqala okungapheliyo kunye nokukhuseleka kokukhusela kunye nokukhuselwa ekujikelezeni okufutshane kunye neemeko zokungabikho kwamandla. Xa kuthelekiswa nothotho lwe-DAM1, uthotho lwe-DAM3 luyilelwe ukubetha ...
I-DAM3-1000 MCCB Icandelo leSekethe eliBunjiweyo
Amagqabantshintshi Okwangoku okwenziweyo kwe-DAM3-1000 yecala elibunjiweyo lesekethe elinokubakho ukuya kuthi ga kwi-690A, isetyenziswa ngokubanzi kwisekethe yokuhambisa umbane ukusasaza amandla kunye nokukhusela izixhobo zesekethe kunye namandla ekugcwaliseni kakhulu, kwisekethe emfutshane, phantsi komonakalo wokungaphumeleli kwamandla ombane, apho kutshintshwa i-50 yangoku -60Hz, ikalwe ngokuthe ngqo-yangoku i-1000A. Xa kuthelekiswa noluhlu lwe-DAM1, uthotho lwe-DAM3 luyilelwe umthamo omncinci, umthamo ophukileyo ophakamileyo, onika ukonga amandla okungcono. Iiparamitha zombane zeDAM ...
I-DAM3-1600 MCCB Icandelo leMeko eliBunjiweyo lesekethe
Ushwankathelo lwangoku olulinganisiweyo lwe-Dada DAM3-1600 yebhulorho yesekethe ebunjiweyo inokufikelela kwi-1600A. Ezi zixhobo zombane zikulungele ukukhuselwa kweesekethe zokuhambisa amandla ngokutshintshiselana ngoku kwe-50-60Hz kunye nokusebenza okulinganisiweyo okwangoku ukuya kwi-1000A. Zingasetyenziselwa kwiimoto zombane ukuqala okungapheliyo kunye nokukhuseleka kokukhusela kunye nokukhuselwa ekujikelezeni okufutshane kunye neemeko zokungabikho kwamandla. Xa kuthelekiswa kothotho lwe-DAM1, uthotho lwe-DAM3 luyilelwe i-sm ...
I-DAM3-630 MCCB Icandelo leSekethe eliBunjiweyo
Ushwankathelo lwangoku olulinganisiweyo lwe-DAM3-630 yecala elibunjiweyo lesekethe elinokufikelela kwi-630A. Ezi zixhobo zombane zikulungele ukukhuselwa kweesekethe zokuhambisa amandla ngokutshintshisanayo yangoku kwe-50-60Hz kunye nokusebenza okulinganisiweyo okwangoku ukuya kuthi ga kwi-1000A. Zingasetyenziselwa kwiimoto zombane ukuqala okungapheliyo kunye nokukhuseleka kokukhusela kunye nokukhuselwa ekujikelezeni okufutshane kunye neemeko zokungabikho kwamandla. Iziphaluka zesekethe zibonisa iimpawu zevolumu encinci, ephezulu b ...